archana: साइकलमा नेपालको झन्डा फरर
Posted by archana at 2/06/2009
जेफ ढुङ्गानाको साइकल यात्रा पढेर खुसि लाग्यो । बिशेषत उनले यात्राक्रममा लियका फोटाहरु अत्यन्त सुन्दर ।
देशभित्रै बसेर देश बिगार्नेहरु वा देशबाहिर बसेर कि-बोर्ड ठोकेर मात्रै देशभक्ति खोक्ने म भन्दा जेफ कता हो कता सच्चा नेपाली हुन्। मेरो सलाम छ जेफलाई!
जेफको बारेको यो टाँसो (posting)का लागि अर्चनाजीलाई धन्यबाद!
उत्प्रेरक टाँसोको लागि धन्यवाद
BodhRaj Lamsal said...
Thanksalot, I am really happy to read in nepali language through blog .